Igqubu nomona kubulawa umculi eMlaza
KHULEKANI MASEKO | February 12, 2020
USEKUBHACENI umndeni wobhekene necala lokubulala umculi osafufusa, ogwazwe wabulawa esigamekweni esenzeke kwaK eMlaza ngeledlule.
Umndeni kaMnuz Mvuyisi Mabhuti Moguda (30), obevele eNkantolo yeMantshi yaseMlaza ngoMsombuluko, uthe selokhu kwenzeke isigameko usuthuka izanya emuva kokuthi uhlaselwe ngamalungu omphakathi ethukutheliswe wukubulawa ngesihluku kukaLindokuhle Cele (23). Kuthiwa ashise indlu yommangalelwa. Ukuhlaselwa komndeni kuwuphoqe ukuthi uyobhaca esihlotsheni, ulala obenyoni usaba ukuthi bazowuthungatha bawuthole.
Imindeni yomibili, okamufi nokammangalelwa ngokuhlukana, ichazele abezindaba ngenzwabethi ngokuholele ekuxabaneni kukamsolwa nomufi.
Amalungu omndeni kaMoguda abesenkantolo ngesikhathi kuvela umsolwa, athe ezwa kuthiwa ummangalelwa uthi ugwaze umufi ngoba ubenegqubu lokuthi wayenabantu abamnukubeza ngokocansi esigamekweni esenzeke ngoNcibijane nonyaka. Kodwa umndeni kamufi uthi uyaqala ukuzwa udaba olunjalo.
Ilungu lomndeni kaMoguda elingathandanga ukudalulwa, lithe umfowabo ngemva kokudlwengulwa uhambe amasonto amabili wayohlala ezihlotsheni enamahloni ngokumehlele, esephenduke inhlekisa.
“Sithole ukuthi iningi labantu endaweni belazi ngalesi senzo, bekuyithina kuphela ebesingazi. Kuthe uma sekuvela kwafakazelwa yizimpawu njengoba kwesinye isikhathi ubehlale ezivalele,” kusho ilungu lomndeni.
UMVUYISI Mabhuti Moguda evele enkantolo ngoMsombuluko ngecala lokubulala umculi osafufusa eMlaza uLindokuhle Cele. Isithombe: Motshwari Mofokeng
Lithe batshelwe ngabathile ukuthi umsolwa wayehleli nomufi nabangani bakamufi ngoNcibijane bephuza, okusolakala ukuthi umufi nabangani bakhe bamfakela okuthile okuyisidakamizwa maqede bazitika ngaye ngocansi beshintshana. Liveze ukuthi emuva kwalesi sehlo umsolwa uhambe amasonto amabili wayohlala esihlotsheni ngenxa yokuthi ubesephenduke inhlekisa. Uthe ukholwa wukuthi ugcine esembambela igqubu umufi, okwenze agcine esemgwaza ngoba ubengaxoxi ngokumehlele.
Umndeni uvumile ukuthi okwenziwe yilungu lawo kuphambene nomthetho futhi kubi, kwakumele likhulume nomndeni, livule necala. Kodwa uchaze ummangalelwa njengomuntu onenhliziyo enhle obesebenzela futhi ondla umndeni wakhe.
UNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMphakathi eKZN, uNkk Nonhlanhla Khoza, ugxeke isenzo sokubulawa kukaCele, wathi ummangalelwa kumele athole isijezo esimfanele.
UNksz Nomusa Cele, ongubabekazi kaLindokuhle, utshele izintatheli ukuthi bezwe ngabantu ukuthi umsolwa umbulale umufi ngoba emuhle nokuthi udumile.
“Sizwa kuthiwa ubemzondela ubuhle bakhe, kangangoba kuthiwa ubeze asho ukuthi ufuna ukumona ubuso. Uma sibheka indlela abulewe ngayo njengoba egwazwe ebusweni ummese wasala esweni, kufakazela khona loku okushiwoyo,” kusho uNksz Cele.
UMNDENI kamufi, uLindokuhle Cele, ngesikhathi bevakashelwe wuNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMphakathi KwaZulu-Natal uNkk Nonhlanhla Khoza ukuzobhonga emswaneni izolo. Kusuka kwesobunxele wuNksz Nomusa Cele uyisekazi kamufi, uNkk Funani Cele nogogo kamufi uNkk Zondeni Cele Isithombe: MOTSHWARI MOFOKENG/ANA
Yomibili imindeni iphikile ukuthi laba bebengabangani kodwa yavuma ukuthi bebazana futhi bejwayelene.
UNksz Cele uveze ukuthi bengumndeni bebecabanga ukuthi ingxabano kamsolwa nomufi yaqala ngesikhathi umufi enqaba nomngani wakhe wesifazane kumsolwa, okuthiwa wayemfuna. Uphinde waveza ukuthi utshelwe ukuthi umsolwa ubulale umufi ngoba ubemzonda ngokuthi uyisitabane. Ngesikhathi umsolwa engena enkantolo, izandla zakhe bezibhandishiwe okuvele ukuthi walimala ngesikhathi egwaza umufi.
Icala lihlehlele uMsombuluko wesonto elizayo lapho ummangalelwa kulindeleke ukuthi afake isicelo sebheyili.